Saddex kamid ah ciidamada Masar oo lagu dilay qarax ka dhacay gobolka Siinaay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldSaddex kamid ah ciidamada Masar oo lagu dilay qarax ka dhacay gobolka Siinaay
August 15, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Goobta qaraxa ka dhacay oo kutaala Siinaay. Sawirka: Anadolu.
Qaahiro-(Puntland Mirror) Saddex askari oo kamid ah ciidamada Masar ayaa lagu dilay qarax ka dhacay maanta oo Isniin ah gobolka colaadaha ay ka jiraan ee Siinay, sida ay sheegeen laamaha amaanka.
Qarax ayaa lala eegtay gaari booyad ah oo ay ciidamada militariga lahaayeen kaasoo marayay bartamaha Siinaay, sida ilo wareed ay u sheegeen wakaalada wararka Anadolu.
“Saddex askari ayaa ku dhimatay qaraxa afar kalena waa ay ku dhaawacmeen,” sidaa waxaa Anadolu u sheegay ilo-wareed diiday in magaciisa la sheego.
Ma jirto cid sheegatay masuuliyada weerarkaas.
Tan iyo markii xukunka laga tuuray sanadkii 2013-kii madaxweynihii sida dimuqraadiga ah loo soo doortay ee Maxamed Mursi, ciidamada amaanka Masar ayaa dagaalo culus kula jiray waxay ugu yeereen kooxo argagixiso oo ku sugan gobolka Siinay.
August 18, 2016 Ugu yaraan lix qof oo lagu dilay qaraxyo ka dhacay Turkiga